XOG LA HELAY: Itoobiya oo ahayd maskaxdii ka dambeysay qabashadii Wasiirka Jubbaland. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
[ February 21, 2020 ] DAAWO:-Dr. Cali Khaliif “Waa Khasab inay Somaliland la Hadasho DF Soomaaliya”	English News
HomeMaqal Iyo MuuqaalXOG LA HELAY: Itoobiya oo ahayd maskaxdii ka dambeysay qabashadii Wasiirka Jubbaland.
Dawladda Itoobiya iyo Xukuumadda Soomaaliya ayaa iskaashi amni ka dhaxeeyaa, waxaana la sheegay in ay maalmo kahor magaalada Doolow ee xadka gobalka Gedo la wadaago Itoobiya, ay ku kulmeen qaar kamid ah saraakiisha ciidamada Itoobiya ee kusugan deegaankaas, oo ay ka wada hadleen xaaladdaha Ammaanka.
Wasiirka Amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan ayaa la sheegay in ay is afgaran waayeen ciidanka Itoobiya ee halkaas kusugnaa, waxaana wararku sheegayaan uu diiday dalab ku aadanaa in uu raaco diyaarad ciidan oo ay lahayd Itoobiya oo geyn lahayd magaalada Goday ee Ismaamulka Soomaalida.
Xogaha la helay waxay sheegayaan in ay Soomaaliya & Itoobiya iska kaashadaan qabashada Wasiirkii Amniga Jubbaland Cabdirashii Janan, iyadoo ay soo baxayaan xogo labada dhinacba laga helayo.
Daawo:- Jubbaland oo afduub ku tilmaantay xarigii wasiir Janan.